The 20 fitaovana tsara indrindra ny 2018 - News Fitsipika
From herinaratra-bisikileta sy aforeto ny drôna mba hiadiana amin'ny milina sy ny tady ... hitsambikimbikina nomerika ny taona tsara indrindra ny teknolojia
Ity lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe "The 20 fitaovana tsara indrindra ny 2018" dia nosoratan'i Ian Tucker, fa ilay Mpandinika ny alahady faha-9 Desambra 2018 06.59 UTC
Fa tsy miantehitra amin'ny hafanana, -baovao ity fitaovana mampiasa ny fiaramanidina Coanda-flow vokany (izay manampy foana fiaramanidina mahazo haavo) ny mamatotra sy ny fomba volo. Mitaky relearning ny fomba mampirisika ny milantolanto, nefa afaka milaza veloma nafanaina fahavoazana sy ny singed handriny.
Sonos One, Hay fanontana (£ 229)
Sary: Katherine Anne Rose ny Observer
Ny voalohany dia ny Sonos multiroom mpandahateny malaza ho avy feno ny feon'ny Amazon mpanampy, Alexa. "The tsara indrindra-manodidina rehetra mozika-mpandahateny mahay mifantoka hita ao amin'ny UK,"Hoy ny mpiambina. Zavatra tsy voafetra-fanontana dika avy amin'ny loko dimy voafantina ny Danoà fanaka mpamorona Hay.
VanMoof herinaratra X2 (£ 2.398)
Ny modely farany avy amin'ny holandey e-bisikileta Mpanao manana isan-karazany ny 90 kilaometatra, handeha à 25km / h, ary manasongadina ny nahay ny anti-halatra fitaovana.
Tangram Smart tady (£ 80)
Tsy misy olon-tsotra analogue minia tady, mamantatra ny Fitness ity tahirin-kevitra rehefa mitsambikina. ny 23 Jiro LED haneho ny workout by MediaWiki tapaky ny rivotra, alohan'ny syncing azy ireo ny finday amin'ny alalan'ny finday ny Smart Gym fampiharana. Hitsambikimbikina dia tsy nahatsiaro ho futuristic.
Ve ianao avo-Powered, -on karazana foana izay te-hanao antso, Siri fanontaniana sy mihaino ny mandrisika podcasts, rehetra rehefa ho coached alalan'ny fiofanana 10k drafitra? Raha izany no izy ireo no tokony ho eo amin'ny tsi lisitry. Tsy ratsy noho ny mihaino mozika, koa.
Đi Mavic Air (£ 669)
Feno hipoka ny lafiny-drôna dia afaka heny ka ento amin'ny anorak fanao am-paosy. Dia manasongadina ny fomba telo-gimbal for rocksteady filming, UHD tifitra sy ny fanaraha-maso lavitra foldable.
7. Games hampionona
Mihosinkosin amin'ny taona 90 Nostalgia izany Retro hampionona feno ny pixelated Hits ny yesteryear, amin'ny Final Fantasy III ny Boriky Kong Firenena ary ny splendiferous Street Fighter II Turbo: Hyper Ady.
8. Portable mpandahateny
Audio Pro Adaona C3 (£ 250)
Fa ny portable mpandahateny, ny Adaona C3 Packs ny totohondriny. Miaraka amin'ny hery tanteraka output ny 25 Watts ary ny 15 ora ny fiainana bateria, dia niakatra avo roa heny toy ny Premium multiroom an-trano mandaha-teny sy manasongadina ny hoditra tahony noho ny fandraisany ny mozika miaraka aminao na aiza na aiza alehanao.
9. Fitness mpikaroka
Ny vívosmart 4 ny fitaovana fanaraha-maso dia afaka manara-maso ny zava-drehetra fitaovana avy amin'ny ra haavon'ny oksizenina sy VO2 Max ny torimaso sy ny adin-tsaina tsingerina haavon'ny. Ary na dia ny tsara tarehy tarika dia hanim, ny bateria dia afaka manara-maso ny tompony mandritra ny herinandro eo mamaly ny.
Sary: AFP / Getty Images
Raha ny Tesla Elon Musk dia famoronana va ny matsatso, lohatenin-gazety, Jaguar dia nandefa avo-fampisehoana SUV. Ny mpanamboatra milaza ny isan-karazany 292 kilaometatra isan-poana, fa ny mpanome hevitra nahita azy ho akaiky kokoa 200. Na izany aza, ny tarehiny, haingana, nitsapatsapan'ny sy aotra-entona manao izany ny mpandresy - raha manana ny vola.
Fanavaozam-baovao momba ny kilalao orinasa Cozmo, ny Vector dia nihaino, miresaka, mahita, foana-on milina "mpiara-mitory". Ny toetra dia Wall-E-esque, fa tsy ho ela manasongadina Alexa fampidirana, mamela anao mifehy ny fitaovana mifandray.
12. finday avo lenta
Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Miaraka amin'ny telo-lensed Leica fakan-tsary, 3D face-scanning rindrambaiko sy ny in-efijery tondro sensor, Huawei ny Mate 20 Pro dia, tahaka ny mpiambina hoy i, "Fandringanana sisin'ny famirapiratana". Tamin'ny 35 ora ny fiainana bateria, mahery sy ny Wireless mamaly ny processeur, fa ny laharana voalohany Android finday avo lenta.
Canyon Grail CF SL 7.0 (£ 1.999)
Natao ho an'ny mitaingina ny lalana sy ny vatokely, bisikileta io dia fitaovana hiatrehana karazana rehetra faritra eny-dalana sy ny. Marika mampiavaka toetsika dia miendrika ho shouldering izany ny sakana sy ny tsy manam-paharoa Canyon sy tena mampahazo aina sehatra roa-handlebar.
Manasongadina ny fanafohezan-teny manan-danja, tsena ity dia manasongadina ny mpitarika teboka atsangana hitondra hazavana-emitting diode (QLED) lamba izay, fa maro be ny antony ara-teknika, no fomba maranitra, mamirapiratra ary mampiseho karena mainty hoditra noho ny tsy tapaka avo Ultra-malgache (UHD) efijery.
15. mifandray an-trano
akaniny Hello (£ 229)
Ny lakolosim-baravarana miaraka amin'ny fahasamihafana, Hello no mpiantso an-tsoratra rehetra, mampiasa endrika fanekena, ary aoka ianao hiresaka mpitsidika, na dia ianao avy. "Ny avo-end, endri-javatra-karena safidy ho manan-tsaina lahatsary lakolosim-baravarana izay manatrika ny anjara eo amin'ny anoloan'ny an-tranonao,"Hoy ny mpiambina.
A Midi-maso, Ohatra, amponga pad sy ny maro hafa ny zavatra, izany dia fitaovana mahery vaika ho an'ny olona amin'ny fahalalana fototra ny elektronika mozika. Omeo izany budding Daft Punks dia ho tonga ny tena Daft Punk.
Tsy toy ny teo aloha maro headsets, fitaovana io dia tsy mitaky smartphone na PC eo amin'ny fitondrana izany. Mety hijery fa donto sy fotsy, fa indray mandeha teo amin'ny fehikibony ny lohanao futuristic ireo solomaso afaka hitondra anao multifarious tontolo ny voly sy ny fialamboly.
Io hala-bot afaka hiady AR-niteraka mpanohitra na hafa tena bots - fahasimbana dia nampiharina amin'ny alalan'ny finday avo lenta ny avy amin'ny lisitra fizahany ny fitaovam-piadiana sy ny tetika. mitondra Robot Wars ny efitrano fandraisam-bahiny.
Kevitra noho ny mividy ny fakan-tsary dia tsara tarehy standalone Slim izao andro izao, fa raha misy sahisahy ianao karazana, io isa mikitoantoana hovonjeko ho afaka amin'ny hampiharihary ny faharatsian'ny ny finday avo lenta ho henjana tontolo. Tantera-drano ny 30m, Hivaingana-porofo, Ary mampifandray ny telefaonina amin'ny alalan'ny Bluetooth for haingana fanatsofohanao sary.
Sary: Katherine Anne Rose ny Observer Sary: Katherine Anne Rose ny Observer
Superlight ary faran'izay mahazo aina, ireo écouteur manasongadina faran'izay feo-ny fanafoanana sy mampiasa feo adaptive fanaraha-maso mba hamela anao mba hanitsy ny karazana ny fanafoanana ny environment.guardian.co.uk © Guardian News & Media Limited 2010
← Izay Apple MacBook solosaina findainy tokony mividy? Ary mbola hanohon efijery sy 5G: inona no tonga ao amin'ny finday avo lenta amin'ny 2019? →